I-Airbus yokunyusa unxibelelwano lomda phakathi kwamazwe e-GCC
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Airbus yokunyusa unxibelelwano lomda phakathi kwamazwe e-GCC
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Ubungqina besivumelwano (i-PoC) isivumelwano siya kuvumela i-Airbus ukuba ivavanye unxibelelwano lweeNethiwekhi zoKhuseleko loLuntu, naphakathi kwemimandla yamazwe amabini eGulf.
I-Airbus isebenza ukuxhasa iinjongo zotshintsho lwedijithali ze-GCC.
Oonobhala Jikelele beBhunga leNtsebenziswano kwiGulf (GCC) kunye neAirbus batyikitye iMemorandam yokuQondana.
I-Airbus iphuhlisa isicwangciso esineenkcukacha zokujongana nayo yonke imishini- kunye neemfuno ezibalulekileyo zeshishini kwiimarike ze-GCC.
Unobhala Jikelele weBhunga leNtsebenziswano kwiGulf (GCC) kunye neAirbus batyikitye iMemorandam yokuQondana (MoU) eqhubekayo Expo 2020 eDubai ukukhulisa ulungelelwaniso lokhuseleko nonqamleze imida kunye nonxibelelwano phakathi kwamazwe e-GCC, ngokuqala "ngobungqina bengcinga" yokuphunyezwa phakathi kwamalungu amabini.
Ubungqina besivumelwano (PoC), esityikitywe nge-3 ka-Okthobha kwindawo yemiboniso ye-GCC kwi-Expo, iya kuvumela Airbus ukuvavanya unxibelelwano lweeNethiwekhi zoKhuseleko loLuntu, naphakathi kwemimandla yamazwe amabini eGulf.
I-MoU ityikitywe ngu-Maj. UGeneral Hazaa Ben Mbarek El Hajri, uNobhala oNcedisayo wezeMicimbi yoKhuseleko, uNobhala Jikelele weBhunga leNtsebenziswano kwiGulf, kunye noSelim Bouri, iNtloko ye-Middle East, i-Afrika ne-Asia Pacific yoNxibelelwano loMhlaba oKhuselekileyo kwi-Airbus.
“Siza kusebenzisa i-Inter-System Interface ukudibanisa iinethiwekhi ezimbini zoNxibelelwano oluBalulekileyo kunye nokuvula indlela yokusebenzisana okungcono, okukhawulezayo kunye nokusebenza ngokukuko phakathi komkhosi wokhuselo lwemida ovela kwizizwe ze-GCC. Siza kuphakamisa amanqaku anamhlanje kwiinkqubo zethu zeTetra ukomeleza unxibelelwano olunqamleze imida phakathi kweearhente zoKhuseleko loLuntu, nto leyo ibaluleke kakhulu ngexesha apho sijamelene nemiceli mngeni emininzi yokhuseleko lwemida. Ngaphantsi kwesivumelwano sethu se-POC, iqela lethu leengcali liza kuvavanya ezona zinto ziphambili kubuchwephesha kunye nokusebenza kwale nzame ngelixa lihambisa amanqanaba aphezulu okufumaneka, imfihlo kunye nokhuseleko esilibonelelayo. Siyabamkela ubambiswano lwethu noNobhala Jikelele we-GCC kwaye siyababulela ngokuthembela kwabo kwitekhnoloji yethu. ” USelim Bouri, iNtloko yeMbindi Mpuma, iAfrika neAsia Pacific yoNxibelelwano loMhlaba oKhuselekileyo kwiAirbus icacisa.
“I-Airbus isebenzela ukuxhasa iinjongo zotshintsho lwedijithali ze-GCC. Siphuhlisa isicwangciso esineenkcukacha zokulungisa eyona mishini- kunye neemfuno ezibalulekileyo zeshishini kwiimarike ze-GCC ngokwakha unxibelelwano olukhuselekileyo nolungenamthungo kunye nothungelwano lwentsebenziswano. Le MoU yamva nje ibubungqina boku kuzinikela, ”wongeze watsho uBouri.
Iinqwelomoya zisuka eNur-Sultan zisiya eBishkek ngeAir Astana ngoku
Ukubhuka ngenqwelomoya ukuya eUSA kuyenyuka
I-Tel Aviv isiya eDubai: inqwelomoya entsha nge-Emirates
IHawaii ithi ndlela ntle kwi-COVID-19
Abaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo banokundwendwela iSydney ...
Imfuno yokuhamba ibuyile kodwa isezantsi kakhulu ngaphambi kwe-COVID ...
IJamaica Igodusa iGolide kunye neSilivere kwiiMbasa zeTravvy
Ezokhenketho, ukuTshintsha kweMozulu, iZero yeNet: Saudi ...
I-WTTC: Icandelo lokuhamba kunye noKhenketho eFransi limiselwe...
IMitchells vs The Machines: Eyona filimu yoSapho eNtsha...
UDelta wongeza ngaphezulu kweenqwelomoya eziyi-100 ezivela eNew York
I-Russia iyalela 'iveki engasebenziyo' njenge-COVID-19 ...